🥇 ▷ Waxaad isku daydaa inaad aruuriso $ 2.5 bilyan oo aan dhammaan doonin lacagtii 2020 ✅
Waxaad isku daydaa inaad aruuriso $ 2.5 bilyan oo aan dhammaan doonin lacagtii 2020
Lacagtii Hi Waxay ku dhammaatay lacag caddaan ah: Waxay sheegtay in lacagteeda ay gaartay “ugu yar ee loo baahan yahay” isla markaana ay lacagahaasi soo afjari karaan Febraayo 2020. Sidaas darteed, hawl wadeenku wuxuu qorsheynayaa inuu soo aruuriyo ilaa $ 52 bilyan, marka lagu daro iibinta waxyaabaha aan qaybo istiraatiiji ah oo shirkadda ah sannadaha soo socda. Ku biirista TIM hadda waa laga saari doonaa.
O Estadão hel saadaalinno ay Oi siisay Anatel: waxaa jira “itimaal sare” oo wada-shaqeyntu ka joojineyso howlihi la’aanta lacag la’aan haddii aan wax la qaban, taasoo keenta in “saameyn aad u sarreysa” ay ku yeelato waaxda isgaarsiinta. Saddexdii bilood ee labaad oo keliya, waxay lahayd khasaare dhan $ 1.5 bilyan.
Taasi waa sababta ay OI fuliyaasha ugula hadlayaan bangiyada si kor loogu qaado $ 2.5 billion. Howl wadeenku wali go’aan kama gaarin sida tan loo sameyn doono, laakiin CFO Carlos Brandão ayaa usbuucii hore sheegay in shirkada ay dareyso qaar ka mid ah xulashooyinka: mid waa in la soo saaro amaahda, taas oo ah, iibinta dammaanadaha deynta. Beddelka kale waa in la kordhiyo raasumaalka iyadoo la soo saarayo saamiyo cusub oo sarrifka saamiyada.
Intaa waxaa u dheer, Oi wuxuu ku talajiraa inuu R $ 6.5 bilyan R R $ 7.5 bilyan ka iibiyo isagoo iibinaya hanti aan istiraatiiji ahayn: tan waxaa ku jira munaaradaha isgaarsiinta, xarumaha xogta iyo guryaha. Howlgaladan ayaa loo qorsheeyay 2020 iyo 2021.
Xitaa waxaa jira warar xan ah oo ku saabsan is dhexgalka suurtagalka ah ee u dhexeeya Oi iyo TIM. Si kastaba ha noqotee, hal ilo ayaa sheegaya Estadão Telecom Italia sidoo kale si weyn ayaa loo amaahday, umana arko midnimada labada hawl wadeen inay tahay mudnaan.
Oi wuxuu soo bandhigay saadaalintiisa kulamada uu la yeeshay Anatel todobaadkii hore, oo ay ku jiraan xubnaha guddiga iyo madaxweynaha hay’adda Leonardo Euler de Morais. Wuxuu dafiray wararka xanta ah ee suuragalka ah in faragalin la sameyn karo, isagoo sheegay in tani ay dhici karto oo keliya kiiskan dambe: “xal suuq xaqiiq ah ayaa laga doorbidayaa isbedelka togan ee xaaladda.”
Dowladdu waxay rabtaa PLC 79 ogolaansho si loo caawiyo Hi
Si loo caawiyo Oi, dowladdu waxay dooneysaa inay dedejiso ogolaanshaha PLC 79/2016 (Golaha Sharciga), oo u horseeday horumar cusub isgaarsiinta. Sidaas awgeed, hawl wadeennada khadka tooska ah waxay yeelan doonaan xorriyad dheeri ah si ay u dejiyaan qiimeyaal, sida telefon moobiilka ah; waxayna qaadi doonaan kharash hooseeya sababta oo ah ma heystaan ​​bartilmaameed caalami ah oo ay ku rakibtaan dhagaha dhegaha.
Biilka ayaa lagu hakiyay bilooyin Guddiga Sayniska iyo Teknolojiyada. Saraakiisha dowladda ayaa doonaya in Madaxweynaha Senate David Alcolumbre (DEM-AP) inuu qoraalka toos u galiyo kalfadhiga si loogu ansaxiyo 30 maalmood gudahood.